उप’स’चिव स’ञ्जेललाई कु’ट’पि’ट ग’री अ’भ ‘द्र व्य’व हार गर्ने कर्मचारीहरूलाई मु’द्दा ! – iNews16
उप’स’चिव स’ञ्जेललाई कु’ट’पि’ट ग’री अ’भ ‘द्र व्य’व हार गर्ने कर्मचारीहरूलाई मु’द्दा !
विराटनगर / श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेललाई कु,ट,पि,ट गरेको आ’रोपमा प’क्राउ परेका जना महिला कर्मचारीहरूलाई म्याद थप गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ । आफ्नै कार्यालयका कार्यालय सहयोगी दुई जना महिला कर्मचारीले शनिबार ११ बजे भ्र’ष्टाचार वि’रोधी अभियान्ता सञ्जेललाई कु,ट, पि,ट गरेका थिए ।
सञ्जेललाई कु,ट,पि,ट गरेको आ’रोपमा प’क्राउ परेका कार्यालय सहयोगीहरु नेत्रकुमारी भट्टराई र मेनुका कोइरालालाई जिल्ला प्रशान कार्यालय मोरङमा ‘अ,भ द्र व्य,व हारको मु’द्दा’ मा म्याद थप गरि अनुसन्धान सुरू गर्ने तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घ’टनामा मिलापत्र गर्न सञ्जेलले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुमाथि मु’द्दा चल्ने भएको हो ।
शनिबार साँझसम्म दुबै पक्षबीच मोरङ प्रहरी कार्यालयमा छलफल भएको थियो । सञ्जेलले आफूमाथि कु,ट,पि,ट गर्नेलाई का’नूनी का’रबाही हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रहरीले का’र्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले प’क्राउ परेका दुई जनालाई अ,भ ,द्र मु’द्दामा म्याद थप गरि अनुसन्धान सुरू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सञ्जेललाई कु,ट,पि,ट गर्ने दुवै जना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका कार्यालय सहयोगी हुन् । सञ्जेलले सहन नसक्ने गरि अ,पशब्द बोलेर दु,व्र्य वहार गरेको, अनावश्यक रुपमा काममा पेलाउने र जिम्मा नै नभएको वस्तुको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको आ’रोप लगाउँदै कु,ट,पि,ट गरेका थिए ।
Previous ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि ‘बग्गीखाना’ पूर्ण सिल, एसएसपीसहित ३७५ जना क्वारेन्टइनमा
Next मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डलाई निर्घा’त कु’ट्ने नेपाली नै !